Kabtan Lionel Messi oo ku soo laabtay tababarka Barcelona tan iyo markii uu kooxda weydiistay inuu tago – Gool FM
Kabtan Lionel Messi oo ku soo laabtay tababarka Barcelona tan iyo markii uu kooxda weydiistay inuu tago
Haaruun September 7, 2020
(Barcelona) 07 Seb 2020. Kabtan Lionel Messi ayaa dib ugu soo laabtay tababarka Barcelona markii ugu horreysay markii uu kooxda weydiistay inuu isaga tago.
saakay oo Isniin ah ayay Barca waxa ay barteeda Twitter-ka soo dhigtay weeraryahankeedan 33-sano jirka ah oo xiran maaliyadda midabkeedu Pink-ga yahay ee saddexaad oo ay kal ciyaareedkan 2020-21 ay kooxdu ku ciyaari doonto.
Waxaana sidoo kale sawirro la soo qaaday ay muujinayaan xiddiga xulka qaranka Argentina oo isagoo kaxaysanaya Baabuurkiisa Mercedes ah ku sii xaroonaya xerada tababarka Kooxda Barcelona.
Messi ayaa bishii la soo dhaafay waxa uu kooxdiisa Barcelona ku wargeliyey inuu doonayo inuu xagaagan isaga tago, laakiin kooxda reer Spain ayaa u sheegtay in heshiiskiisa lagu jabin karo 700 milyan oo euro oo laga doonayo kooxdii rabta inay la saxiixato isaga, isla markaana uusan beeca xorta ah ku bixi doonin.
Intaasi kaddib Messi ayaa go’aansaday inuu iska sii joogo kooxda uu 16-ka sano u ciyaarayo ee Barcelona isagoo maankiisa bedelay, waxaana la arkay maanta isagoo dib ugu soo laabtay tababarka naadiga.
Ansu Fati oo shaaciyay qofka uu i hibeeyay goolkiisii ugu horreeyay ee qaranka Spain & sababta
RASMI: James Rodríguez oo ku biiray horyaalka Premier League